आफन्तले अझै किन बुझेनन् भागरथीको शव ? यस्तो छ कारण. « Ok Janata Newsportal
आफन्तले अझै किन बुझेनन् भागरथीको शव ? यस्तो छ कारण.
काठमाडौं । बैतडीकी भागरथी भट्टको हत्याका संलग्न भएको आरोपमा उनकै भाई नाता पर्ने दिनेश भट्टलाई प्रहरीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ । तर, भागरथीका आफन्त र गाउँलेले उनको बलात्कारपछि हत्या भएको रिपोर्ट चिकित्सकले सार्वजनिक गरेपछि शव बुझ्न मानेका छैनन् ।
गाउँले र आफन्तले भागरथीको बलात्कारी को हो ? भन्दै पत्ता लगाउन प्रहरीलाई गुहारेका छन् । स्थानीय मनोरथ भट्टका अनुसार भागरथीको बलात्कार भएको भन्दै विश्वमा चर्चा भइसकेको छ । तर, बलात्कारी किन समातिएन ।
उनले भने, ‘हाम्री छोरीको बलात्कार भएको प्रमाणित भइसकेपछि पनि प्रहरीले बलात्कारीलाई किन पक्राउ गर्न सकेन । आखिर भागरथीको बलात्कार कसले गरेको हो ?’
‘हत्यारा सार्वजनिक भएपनि बलात्कारीलाई प्रहरीले खोजी नगर्नु शंकाको विषय छ, हामी बलात्कारी पत्ता नलागुञ्जेल शव बुझ्दैनौ, भट्टले भने ।’
केही स्थानीयहरु १६ वर्षीय दिनेशले भागरथीको हत्या गर्न नसक्ने भन्दै सशंकित भएका छन् । स्थानीय भुवन काकी भन्छन्, ‘१६ वर्षको केटाले कसरी भागरथीको हत्या गर्न सक्छ ? यसमा अझै अनुसन्धानको दायरा बढाउनुपर्छ ।’ परिवारका सदस्यहरु पनि दिनेशको घटनामा संलग्नता देखिएपछि अचम्मित परेका छन् ।
यतिबेला बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका स्तब्ध बनेको छ । गाउँलेहरु त्रसित भएका छन् । स्थानीय सनातन धर्म माविमा अध्ययनरत छात्राहरुको मन अझै थामिएको छैन । दिनेश नै हत्याको आरोपी भन्दै प्रहरीले सार्वजनिक गरेपछि उनीहरुपनि शंकामै छन् ।
यता, प्रहरीले सबै प्रमाण र कल डिटेलका आधारमा दिनेशलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । प्रहरीमाथि शंका नगर्न र अनुसन्धानमा साथ दिन सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डिआईजी उत्तमराज सुवेदीले सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
अहिले दिनेश भट्ट १५ वर्ष पूरा गरी १६ मा दौडिरहेका छन् । उनको हत्यामा संलग्नता प्रमाणित भएपछि र अभियुक्त साबित भएपछि १ वर्ष सुधार केन्द्र बस्नेछन् । १८ पूरा भएपछि मात्रै उनलाई कारागार पठाइनेछ ।